"Education for Myanmar Youths": ပညာရေး အကျပ်အတည်း (၃)
Posted by မေငြိမ်း at 1:02 AM
ကလေးတွေရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးခွင့်နဲ့ပတ်သက်ရင် ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ နောက်ထပ် အားကျစရာကောင်းတဲ့ နောက် အချက်တစ်ချက်ကတော့ ကလေးစာပေ ထွန်းကားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
This child is father of the man. ဆိုတာ အားလုံးကြားဖူးနားဝ ရှိနေကြပေမယ့် တိုးတက်ဖို့ အကြောင်းပြောရင် လူငယ်ထုကိုပဲ ကြည့်ပြောနေကြတယ်. လူငယ်ထုညံ့တာကို အပြစ်ဖို့တယ်. သူတို့ ဘယ်လိုစာပေတွေနဲ့ ကြီးပြင်းခဲ့ရတယ် ဆိုတာကို လူကြီးတွေက မတွေးဆကြဘူး.
တိုးတက်တဲ့ နိုင်ငံတွေမှာဆိုရင် ကလေးစာပေတွေ ကောင်းကောင်းထွန်းကားပါတယ်. စာပေတင်ပဲလား ဘယ်ဟုတ်မလဲ. အနုပညာပါ ထွန်းကားတယ်.
အထင်ရှားဆုံးဥပမာပြရရင် Harry Potter ပေါ့ဗျာ. စာအုပ်က ဒဏ္ဍာရီဆန်ပါတယ်. ဒါကို logically နဲ့ ကလေးတွေရဲ့ စာရိတ္တ၊ တွေးခေါ်မြော်မြင်ပုံ ဘာညာ ဆန်းစစ်နေစရာမလိုပါဘူး. Creative Mind လေးတွေ ကလေးတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ်လာအောင် ရေးသွားတာ သိပ်လှပါတယ်.
ဂျပန်ပြည်က Pokemon၊ USA က Mickey Mouse ဒါတွေလည်း ဒီလိုပါပဲ. Alice in Wonderland ဆိုရင်လည်း ဟိုရောက်ဒီရောက်နဲ့ တကယ်ကို ဘာတွေမှန်းမသိပါဘူး. ဒါပေမယ့် သိပ်ကောင်းတယ်. ထူးထွေဆန်းပြားတဲ့ စိတ်ကူးစိတ်သန်းတွေနဲ့ တင်ဆက်သွားတယ်. ကလေးတွေကို လွတ်လပ်စွာတွေးခေါ်တတ်အောင် မြေတောင်မြှောက်ပေးသွားတယ်.
ကျွန်တော်တို့ တိုင်းပြည်ရဲ့ ပညာရေးတိုးတက်ဖို့ ကလေးတွေရဲ့ စာပေသင်ရိုးညွှန်းတမ်းကအစ၊ ကလေးစာပေအလယ်၊ အမြင်ရင့်ကျက်လက်ခံနိုင်မှု အဆုံး စသည်ဖြင့် စလယ်ဆုံး သုံးပါးကောင်းဖို့ လိုပါတယ်.
ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာတွေ အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမယ့်အစား ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက်နဲ့ပဲ တတ်စွမ်းသမျှ ကလေးတွေ အတွက် စာပေကောင်းတွေ ရေးသားသင့်တာ စာရေးဆရာကောင်းတိုင်း၊ တိုင်းပြည်ချစ်သူတိုင်းရဲ့ သမိုင်းပေးတာဝန်တစ်ရပ်ပါပဲလေ.
ကိုယ်ကစာရေးဆရာမဟုတ်ခဲ့ရင်လည်း ကလေးတွေအတွက် ဒါတွေလိုအပ်နေတယ်ဆိုတာကို သိပြီးတော့ လိုအပ်တာလေးတွေကို ပံ့ပိုးပေးသွားနိုင်ရင် သိပ်ကောင်းမယ်.
ကလေးဆိုတာ နဂါးကြီးတွေ၊ သူရဲကောင်းတွေ၊ မင်းသမီးလေးတွေ၊ စုန်းမတွေ၊ ဒါတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်. George Orwell ရဲ့ စာအုပ်ကောင်းတွေ မင်းတို့ဖတ်သင့်တယ်. ဒါမှ မင်းတို့ တိုးတက်မယ်လို့ သွားပြောလို့ မရပါဘူး. ကလေးနဲ့ပတ်သက်လာရင် ကလေးတွေဖက်ကပဲ ကြည့်ပြီး သူတို့လိုအပ်ချက်လေးတွေကို ဂရုတစိုက်နဲ့ ဖြည့်စွမ်းသွားသင့်ပါတယ်လေ.
ပြောစရာတွေကျန်ပါသေးတယ်ဗျာ. ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ပဲ ပြောပါရစေဦး. ကြုံကြိုက်တဲ့တစ်နေ့ကျရင် ပို့စ်တစ်ခုလောက် လာတင်ပါဦးမယ်.